Ikhaya laseSalice 2/6 abantu - I-Airbnb
Ikhaya laseSalice 2/6 abantu
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguDaniel
Ukulungiswa kokugqibela, indlu esondeleyo kunye neyamkelekileyo.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlala elinesicwangciso esivulekileyo
2 amagumbi okulala:
Igumbi 1: ibhedi ephindwe kabini kunye nebhedi eyodwa
Igumbi 2: ibhedi ephindwe kabini
Igumbi lokuhlambela eli-1 elinezixhobo
Ngo-2020, irhafu yabakhenkethi iphinde yaziswa kwaye ayifakwanga kwixabiso lokugqibela. Ilingana ne-€ 0.70 ngobusuku ngomntu ngamnye ngaphezu kweminyaka eyi-14 ukuba ifakwe kwi-10 ubusuku obukhulu. Irhafu kufuneka ihlawulwe ngexesha lenkqubo yokungena.
Indlu esondeleneyo enesitayile esihle esincinci esibekwe kwindawo yabucala.
Abamelwane bethu banesilwanyana egadini yabo, esifana imeyile, ibhokhwe, inkukhu, esinokubonwa ngebalcony.
Eyona nto eyenza indawo yethu yokuhlala ikhetheke ngokuqinisekileyo ziinkcukacha zengqwalasela nococeko.
Indawo yokuhlala enefestile enkulu ijonge ngqo kwiintaba zeqela leDolomites elineesofa ezi-2 ezinkulu (inokuba yibhedi yesofa esetyenziswa kwimeko yokufuna ibhedi yesithandathu) 50 "iTV enesatellite kunye nokufikelela kwidijithali, iWi-Fi ene30 uqhagamshelo mb/s.
Ikhitshi ixhotyiswe kakuhle ngayo yonke into oyifunayo ukupheka, ukutya kunye nokusela, i-oveni, i-dishwasher, i-microwave, i-toaster, i-wather boiler, i-mixer...
Ukufudumeza kuneendawo zokubeka ixesha elibekiweyo ezigcina indlu kubushushu obusuka kwi-18 ° ukuya kwi-22 ° emini. Ngesicelo, ubushushu bunokunyuswa/bunciphe.
Indawo yokuhlambela enazo zonke iinkonzo, ishawari enkulu eyakhelweyo egqunywe ngamatye.
Amagumbi omabini axhotyiswe ngomabonakude wedijithali kuphela, kunye newodrophu
Igadi iyabelwana, inkulu kwaye ibiyelwe, ngexesha lasehlotyeni inendawo yebarbecue kunye nezitulo zedesika zokutshisa ilanga. Sinenja i-Golden Retriever ehlala isebenzisa le ndawo eqhelekileyo, edlalwayo!
Indawo yokugcina isetyenziselwa ukugcina imithwalo, izixhobo zemidlalo kunye neebhayisikili.
Malunga nendawo yokupaka sinendawo yokupaka yabucala enye kuphela, indawo yokupaka kawonke-wonke.ekufuphi.
I-Panchià yidolophana encinci kwaye ezolileyo yeentaba entliziyweni yeDolomites ehlala eVal di Fiemme kufuphi neVal di Fassa.
Ikhoyo kwilali, imakethi encinci enazo zonke izinto eziyimfuneko, kumazwe angabamelwane, nangona kunjalo kukho phantse zonke iintlobo zeenkonzo (i-spa, amachibi okuqubha kawonke-wonke, iindawo zokutyela, iipizzeria, amaziko amaninzi e-ski kuzo zombini i-alpine kunye ne-skiing yelizwe, ngexesha ihlobo / intwasahlobo / ixesha lokwindla lokuhamba intaba kunye nokuhamba ngebhayisekile entabeni)
Inombolo yomthetho: 022134-AT-599037